Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo tagay Washington hadalna ka jeediyay machadka nabadda | raascasayrmedia.com
← Madaxweynaha Jabuuti oo magacaabay gole wasiirro oo ay saddex haween ah xubno ka yihiin
Dagaalada Muqdisho oo habeensaday iyo faah faahin kasoo baxaysa →
May 13, 2011 · 4:54 pm
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo tagay Washington hadalna ka jeediyay machadka nabadda
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Mudane Mohamed Abdullahi Mohamed (Farmajo) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray caasimada dalka Mareykanka ee Washington DC ka dib markii uu shirkii Golaha Ammaanka ee QM uu soo gabagaboobey galabtii Arbacada 11ka May 2011.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa Khamiistii 12kii May 2011 booqday xarunta nabadda ee loo yaqaano (US Institute of Peace) oo uu halkaas khudbad dheer ka jeediyey. Khudbadii Ra’iisul Wasaaraha oo inteeda badan ka hadleysey nabadda iyo baahida ay Somalidu u qabaan nabad waarta, sababaha uu u aqbalay xilka isagoo goob nabad ah joogey, waxuu kaluu sheegay in Dowladda ay horumar baaxad leh ka sameysey dhanka nabadda. RW ayaa u mahadceliyey David Smock iyo hay’ada USIP oo oggolaatay inay 40 Somali ah siin doonto tababar la xiriira xalka dagaalka. Fadlan fiiri lifaaqa oo ah khudbadii RW oo English ah.
Ra’iisul Wasaaraha Somalia ayaa sidoo kale Khamiistii 12 May 2011 kulamo la qaatay Senaterada kala ah Leiberman oo horey u ahaa musharax Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka, Senator Charles E. Schumer, Senator Richard G. Lugar, iyo Senetaro kale oo ay ka mid ahaayeen Senator King.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa maalmahan ku sugan dalka Mareykanka isla markaana wada dadaalo ku wajahan sidii Dowladda Mareykanka ay u labolaabi laheyd taageerada DFKMG ah. Ra’iisul Wasaaraha ayaa dhammaan Senetarada oo uu sida gooni goonida ah ula kulmay u sheegayey in Mareykanka uu yahay Dowladda aad u saacida DFKMG ah, ha yeeshee uu sheegay in loo baahanyahay in Mareykanka uu qaato kaalin hoggaamineed ee ku wajahan sidii loo xalin lahaa xaaladda Somalia si dalka loogu soo dabaalo nabad.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in loo baahanyahay in Somalia la siiyo mudnaanta la siiyo Afghanistan iyo Iraq oo uu sheegay in xaaladda dalka ay aad u liidato, kooxaha xag jirka ah ama argagixisada ahna ay ka faa’iiseysan karaan haddii aan DFKMG ah lagu saacidin sidii ay u heli laheyd kaalmo dhaqaale oo ku filan inay kula dagaasho kooxaha argagixisada ah.
Ra’iisul Wasaaraha Somalia ayaa habeenkii Khamiista 12ka May ka qebygalay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay jaaliyadda Virginia ay soo abaabuleen. Xafladan ayaa waxaa ka hadlay mas’uuliyiinta jaaliyadda Virginia. Sidoo kale waxaa ka hadlay xafladda La Taliyaha Sare ee Ra’iisul Wasaaraha Abdirahman Omar Osman (Eng. Yarisow) oo halkaas ku soo bandhigay filim ama documentary la xiriira waxqabadka Dowladda oo si heer sare ah loola dhacay.
Ugu danbeyntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa halkaas ka jeediyey khudbad dheer kana codsaday Somalida US inay kaalin mug leh ka qaataan sidii dalka dib loogu dhisi lahaa. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka warbixiyey shirkii Golaha Ammaanka ee QM waxuuna sheegay in muddo kororsigii baarlamaanka uusan aheyn mid sharciyeysan, loona baahanyahay in dhammaan hay’adaha Dastuuriga ah ay ka wada hadlaan isla markaana ay isku raacaan sida ugu habboon ee looga gudbi karo marxaladda kala guurka ah.
Afhayeenka Xukumadda KMG ah
Inj. C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariiwo)